GNU / CAAFIMAAD: Nidaamyada caafimaadka ee qof walba gaari karo | Laga soo bilaabo Linux
GNU / CAAFIMAAD: Nidaamyo caafimaad oo qof walba gaari karo
210 | | Aplicaciones, Laga soo bilaabo Linux, GNU / Linux, Barnaamijka, Lagu taliyay
GNU Caafimaadka waa nidaam lagu abuuray astaanta isticmaalka software bilaash ah, taas oo loogu talo galay maareeyaan macluumaadka isbitaalka ama xarumaha caafimaadka, abuurista diiwaanada caafimaadka, ama nidaam macluumaad iyo diiwangalinta howlaha laga qabtay xarumaha la sheegay. Nidaamkani waa gratuito waxaana loo isticmaali karaa xarun caafimaad oo yar ama xarun caafimaad, taas oo ay ugu wacan tahay kala duwanaanshaheeda iyo awooddeeda isku dhufashada badan, iyo sidoo kale xarun caafimaad oo leh awood ballaaran.
GNU Caafimaadka waxaa soo saaray Thymbra, shirkad khibrad u leh dhinacyada maamulka, xog-ogaalnimo caafimaad iyo ERP (Qorshaynta Kheyraadka Shirkadaha) oo ku saleysan software bilaash ah. Sanadkii 2011 Thymbra waxay ka dhigeysaa qaybta Caafimaadka GNU GNU Solidaro, oo ah hay'ad aan macaash doon ahayn oo mas'uul ka ah fidinta softiweerka bilaashka ah si loo raadiyo sinnaanta helitaanka nidaamkan, kobcinta GNU Health oo ah mashruuc dhiirrigelinaya hagaajinta macluumaadka caafimaadka, oo siinaya faa'iidooyin bukaanada iyo xirfadlayaasha caafimaadka.
Module Sawirka Caafimaadka GNU
Marka loo eego baahiyaha xarunta ama hay'adda, GNU Health waxay ku bixisaa qaababkan soo socda nidaamka:
Caafimaadka: Xogta guud iyo tan guud ee waxkastoo la xiriira bukaanka iyo xarunta caafimaadka.
Taariikh: Diiwaanka taariikhda bukaan socodka bukaan socodka iyo dabagalka iyaga.
Jadwalka: Kalandarka xakamaynta ballanta ee xirfadlayaasha caafimaadka.
Bukaan-jiifka: Xakamaynta isbitaal dhigista bukaanka.
Qalliinka: Qalliinka iyo baaritaanka qalliinka.
Adeegyada: Biilasha adeegyada bukaanka.
Hab-nololeedka: Talooyinka qaab-nololeedka loogu talagalay iyo bukaanka.
Kalkaalinta: Maareynta adeegyada kalkaalinta.
Shaybaarka: Maamulka sheybaarka iyo dhammaan adeegyadiisa.
Hiddaha: Hiddo-wadaha, Astaamaha, iyo Khataraha Hiddaha.
Dhaqaale-Bulsheedka: Tirakoobka iyo xogta dhaqan-dhaqaale.
Caafimaadka Caruurta: Qayb gaar ah oo loogu tala galay carruurta.
Cudurka dumarka: Qayb gaar ah oo ku takhasusay cudurada haweenka iyo haweenka.
Nambarada QR: Module soo saarista iyo keydinta lambarrada QR ee calaamadeynta.
MDG 6: Yoolalka Horumarinta Millennium 6, hindisaha ay soo bandhigtay NOLOL si loola dagaallamo HIV / AIDS, duumada iyo cudurrada kale.
Warbixinta: Jiilka iswada ee warbixinnada, garaafyada iyo tirakoobka faafa.
ICU: Maareynta qeybta daryeelka degdegga ah.
Keyd: Maamulka bakhaarka agabka caafimaadka ee xarunta caafimaadka.
NTD: Taageerada cudurada kulaylka ee la dayacay.
Sawiridda: Sawiridda caafimaadka iyo maamulidda amarka.
ICPM: Qoondaynta Caalamiga ah ee Hababka Daawada.
Crypto: Adeegsiga Gaarka Gaarka ah ee GNU iyo taageerida dukumiintiyada ama ansaxinta diiwaanada.
Qeyb kasta oo Caafimaadka GNU ah waa la habeyn karaa hadba baahida jirta ee rugta caafimaadka, taas oo ah, mid kastaa inuu madax-bannaan yahay, marka lagu daro iyagu ma laha xannibaadyo la xiriira nidaamka hawlgalka. Qeybta ugu weyn, modulladaas loo arko inay ku habboon yihiin ama lagama maarmaan u yihiin aragtida guud waa la beddeli karaa ama lagu dari karaa.
Tusaalaha Module-ka ugu muhiimsan
Caafimaadka GNU wuxuu ku saleysan yahay Tryton, softiweer lagu maamulo ganacsiga, oo leh madal maamusha diiwaangelinta xogta, oo loogu talagalay maamulka noocyada kala duwan ee ganacsiyada; iyada oo u dhexeysa howlaheeda laga bilaabo diiwaangelinta dhiggeeda (macaamiisha ama kuwa wax qeybiya) illaa xisaabaadka ama diiwaannada heerka lacag bixinta, kormeerka mashruuca, iibinta iyo maamulka wax iibsiga, iyo MRP (Qorsheynta Kheyraadka Waxsoosaarka).
Luuqada ka dambeysa GNU Health waa Python. Luqadda oo si ballaadhan loogu adeegsado horumarka barnaamijyada iyo bulsho weynta taageerta, sidaa darteed waxaan si joogto ah u aragnaa horumariyayaal iyo xirfadlayaal caafimaad oo wax ku biirinaya qalabkan.
Dhalad ahaan, GNU Health ayaa lagu daray PostgreSQL, ee maamulka keydka macluumaadka. Joogtaynta astaanta isticmaalka ee software bilaash ah. Sidan ayaa shaqadeeda loo damaanad qaaday nidaamyada hawlgalka sida Windows, Solaris, Mac OS X, Linux, iyo kuwo kale.
Caafimaadka GNU waxaa horeyba looga isticmaalay dalal dhowr ah oo adduunka ah. Ahaanshaha ikhtiyaar weyn sida nidaamka caafimaadka dadweynaha, taas oo ay ugu wacan tahay xaqiiqda ah in ay gebi ahaanba bilaash tahay lana jaanqaadi karto xarumaha caafimaadka ee kala duwan. Iyo inkasta oo uu abuuray Luis Falcon, wuxuu ku bilaabay mashruuc ka hortagga cudurada iyo ololeyaasha caafimaadka, maanta waxaa loo beddelay inuu noqdo nidaam si caddaalad ah u dhameystiran oo loogu talagalay maamulka xarumaha caafimaadka, loona fududeeyo shaqadooda shaqaalaha hay'adahaas. Fikraddu kuma koobna oo keliya hagaajinta nidaamka diiwaangelinta macluumaadka, laakiin sidoo kale bixinta helitaanka nidaam ku habboon dhammaan bulshooyinka u baahan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » GNU / CAAFIMAAD: Nidaamyo caafimaad oo qof walba gaari karo
Maqaal aad u xiiso badan, ma ii sheegi kartaa sida loo rakibo Debian8. Salaan.
Waad ku mahadsantahay faallooyinkaaga Oscar.
Marka hore waa inaad gujisaa «Download» xiriirka soo socda http://health.gnu.org/es/download.html. Markaa, furi faylka, iskuday naftaada galka oo orod ./gnuhealth_install.sh ama bash gnuhealth_install.sh.
Haddii aad u baahan tahay taageero dheeraad ah, ha ka waaban inaad nala soo xiriirto!
Waad ku mahadsantahay jawaabtaada degdega ah, waxaan hayaa gabadh dhakhtar ah oo aan tusay maqaalka, maadama ay arinka ka heshay mid aad u xiiso badan oo aan kala soo degay oo aan u diray, way baran doontaa, wixii su'aalo ah ayaan kuu soo diri doonaa . Salaan.
Mar dambe uma baahna tijaabinta tijaabada?
Ku orod Tryton. Rakibiyaha mashruuca ayaa daryeela wax walba.
Ku jawaab Francisco
Nidaam aad u wanaagsan! Waa midda aan u adeegsanayno mashruuca wacyigalinta ee kulligeen, waxaanan ka fulinaa dhowr xarumood oo daryeel oo ku yaal aagga.
Waxaan horay u gaadhnay oo aan ku darnay cutubyadeena.
Qaab dhismeedka ay ku shaqeyso isaguna aad buu u wanaagsan yahay.
Wanaagsan, Francisco. Hambalyo, sii wad ka caawinta dadka kale mashaariicdaada.
Waxaan rajeyneynaa inaad nala wadaagi kartid khibradahaaga si faahfaahsan.
Iyada oo raaxo leh. Waxaan haynaa koox fb ah oo la yiraahdo ku xigeenka caafimaadka bulshada, halkaas oo aan ku wadaagno tan iyo howlaha kale.
Waxaa lagugu casuumay inaad booqato.
Alexander TorMar dijo
Waad ku mahadsan tahay maqaalka wanaagsan, waxaan u maleynayaa in si aad u taageerto waa inaad marka hore tijaabisaa ka dibna aad ku talisaa very Aad baad u mahadsan tahay….
Jawaab Alejandro TorMar
Jose Luis Diaz De Las Casas dijo
Maqaal aad u fiican iyo softiweer aad u fiican, su'aashaydu waxay tahay sida loogu rakibo daaqadaha nidaamka hawlgalka, maadaama markay soo dejinayaan arjiga rakibayaashu waxay leeyihiin kordhinta sh gnuhealth_install.sh, si ay u awoodaan inay hirgeliyaan.
Jawaab Jose Luis Diaz De Las Casas
Jose Luis, daaqadaha waxaad ku leedahay Neso, oo kaligeed ah, ama macmiilku u leeyahay OS. Hadda, haddii aad rabto inaad ku isticmaasho shabakad, waxaan kugula talin lahaa inaad ka sameyso server ka socda GNU / Linux, oo ah halka ay ku xiran tahay qaabka Tryton.
Rakibayaasha aad xustay waxaa loogu talagalay GNU / Linux.
Wixii su'aalo ah ee aad qabtid, fariin tuur.
Daniel Escobar dijo
Waxaan rabaa inaan ogaado sida loo rakibo fadlan
Haddaad sidaas u roonaan lahayd inaad i taageerto
Jawaab Daniel Escobar
Salaan Daanyeel. Had iyo jeer waxaan galiyaa qoraalka, maxaa yeelay sababo jira awgood ogeysiisyo ma yimaadaan.
Gnuhealth wiki waxaad ku leedahay talaabo talaabo ah sida loo rakibo. Waxaan kugula talinayaa inaad qaadato maalin, aad u deggan, u akhri gebi ahaanba, oo aad shaqada u degto.
Ma ahan wax adag, laakiin waa mid adag oo taag daran. Haha
Waxa kale oo aad ku rakiban kartaa pip (maareeyaha keydka Python), halkaasoo aad ku rakibayso trytond iyo modules aad u baahan tahay. Waxaa lagugula talinayaa inaad marka hore qeexdo nooca deegaanka aad isticmaali doontid: wax soo saar ama horumar.
Sawir aan ku sameynay Ubuntu oo aan ku leenahay Mega sidoo kale halkaas ayuu kuugu adeegi doonaa:
Salaan iyo inay adiga waxtar kuu leedahay (wixii ka dambeeya daahitaanka jawaab celinta)
Dr. murillo dijo
sideen ugu rakibaa mac? Waad ku mahadsantahay jawaabta hore
Ku jawaab dr murillo
Waa salaaman yahay Dr Murillo,
Ku rakibidda macaamiisha garaafka ah ayaa lagu samayn karaa Mac. Laakiin taasi waa sheekada badhkeed.
Waxa aad u baahan tahay, haa ama haa, waa mashiin Linux ah, oo ah meesha server-ka lagu rakibo.
Mashiinkaani waa kumbuyuutar jirka ah ama mashiin dalwad ah, oo ku shaqeyn kara Mac. Kama aanan shaqeyn goobaha mac-macaanka, sidaa darteed ma kuu sheegi karin maamulayaasha mashiinka farsamada ee lagula taliyay.
vargas kerly dijo
Waad ku mahadsantahay macluumaadka laakiin ma ii sheegi kartaa sida loo rakibo Windows 10
Ku soo jawaab vargas
Anigoo ah arday caafimaad, tani way iga farxisaa 😀
Jawaab Diego Silberberg
Darawalka Radeon Crimson: oo loogu talagalay cayaartoyda Ubuntu
Top 3: Ciyaaraha gawaarida ugufiican ee Linux